Fomba tsy mampihomehy-
Mino izahay fa tsy tokony ho mendri-piderana ireo akanjo am-pitiavana.Ny marika amintsika dia tsy eto mba hiteny amin'ny vehivavy ny fomba fiakanjo. Izy io dia mikasika ny halalin'ny fampaherezana amin'ny mpanjifa sy ny fomba tiany hampitana azy. Noho izany, ambonin'ny zava-drehetra, maniry ny hitambatra miaraka amin'ny marika isika mba hampisehoana fa ny akanjo dia mety ho tena mampiadana sy tsy misy lamaody amin'ny fotoana iray ihany.
Isika dia manolo-tena hampiditra tsy tapaka ny lamaody vaovao, vaovao ary mahazendana. Avy amin'ny safidy goavam-be azonay amin'ny akanjo manaitra izay mampitony ny fampiononana ho an'ny kiraro tsara tarehy izay mifanentana tsara, dia azo antoka fa hanatsara ny kilasinao sy ny halavany amin'ny zavatra entinao.
Fusion amin'ny fomba samihafa-
Ny akanjo eo amin'ny tranokalantsika dia maneho ny maha-izy antsika, ny ekipa samihafa, ary ny fanandramana mandroso. Ny ekipanay dia ahitana olon-kafa avy amina lohahevitra samihafa miaraka amin'ny fialam-boly samihafa, noho izany ny faniriantsika hampiaraka ny karazan-karazan-tsakafo faran'izay tsara ho an'ny rehetra.
Kitiho eto hamaky momba ny soatoavin'ny orinasa na hamangy anay pejy fandraisanaary hahita ny vokatra miavaka ataonay!